Fat Kurasi pfupa rekupa vatengesi - AASraw powder
/ Products / Fat Kurasikirwa upfu
Isu Fat Loss powder vashambadziri, Fat Loss powder inotengeswa, Sezvatavimbisa, yose yeFat Yedu yakasvibisa poda ine tsvina kunze kwe98%.
Kune zvakawanda zvakasiyana nekureruka kwekugadzirisa mhinduro kunze uko.
Izvi zvinosanganisira marudzi ose emapiritsi, zvinodhaka uye zvisikwa zvakasikwa.
Izvi zvinonzi zvinokubatsira kuti uremerwe uremu, kana kuti zvichiita kuti zvive nyore kutapudza ure pamwe nemamwe nzira.
Vanowanzoshanda nenzira imwechete kana yakawanda yezvizvi:
Deredza kudya, zvichiita kuti unzwe uzere zvakanyanya kuitira kuti udye zvishoma maekori
Deredza kunwa kwezvibereko zvakadai semafuta, zvichiita kuti utore zvishoma mumakori
Wedzera mafuta anopisa, achiita kuti iwe upise makoriri akawanda
Ko mishonga inogona kushandura chiito chekuita muviri uye utano hwakanaka sewe nzira yekuderedza uremu here?
Mishonga haisi kutora basa remuviri kana utano hwakanaka senzira yekuderedza uremu. Zvidzidzo zvinoratidza kuti kuyerwa-kurasikirwa kwemishonga inoshanda zvakanaka kana ichibatanidzwa nepurogiramu yemararamiro. Kumbira chiremba wako kana imwe nyanzvi yehutano nezvehupenyu hwehupenyu hwehutano hwehutano huchakushandira iwe.
Ndezvipi zvakakosha zvekushandisa mushonga wemishonga yekurapa kuti uremerwe uremu?
Kana ichibatanidzwa nekuchinja kune mufambiro, kusanganisira kudya uye miitiro yekuita zvekuita, mishonga yemishonga inogona kubatsira vamwe vanhu kuderedza uremu. Pakati pevamwe, vanhu vanotora mishonga yemishonga sechikamu chepurogiramu yemararamiro vanorasikirwa pakati pe3 ne9 yepakati pane zvekutanga kwehutano hwepanyama kupfuura vanhu vari muzvirongwa zvehupenyu vasingatori mishonga. Kutsvakurudza kunoratidza kuti vamwe vanhu vanotora chirongwa chekure-kurasikirwa nemishonga vanorasikirwa ne10 muzana kana zvimwe zvekutanga kutakura.1 Zviwanikwa zvinokanganiswa nemishonga uye nemunhu.
Kurasikirwa kwehuwandu hwe5 kusvika ku10 muzana yehutumbi hwako hwekutanga hunogona kubatsira kuvandudza hutano hwako nekuderedza shuga yeropa, ropa, uye triglycerides. Kurasikirwa uremu kunogonawo kugadzirisa zvimwe zvinetso zvehutano zvakabatana nekuwedzerwa kwehuwandu nekuwedzeredza, zvakadai sekurwadziwa kwepaguru kana kupererwa kwekurara. Kurasikirwa kukuru kunowanikwa mukati memwedzi yekutanga ye6 yokutanga mishonga.
Hezvino izvo iwe zvaunofanirwa kuziva nezve yakajairika mishonga yekurasikirwa uremu zvinodhaka: Orlistat poda, Bitter Orange / Synephrine powder, Sibutramine powder, Clenbuterol HCL powder, Phentermine powder, uye Lorcaserin HCL powder, Cetilistat powder.
Orlistat powder is drug in the drug, sold over-the-counter under the name Alli, uye under prescription as Xenical. Orlistat powder, inozivikanwawo seAlli kana Xenical, inogona kuderedza huwandu hwemafuta iwe unobvisa kubva pakudya uye hukubatsira kuti uremerwe uremu. Iine migumisiro yakawanda, imwe yadzo inofadza zvikuru.
Zvinotoshamisa ndezvokuti kudya kwakaderera kwecarb (pasina madhiragi) kwakaratidzwa kuva yakakosha seviri ye-orlistat uye kudya kwemafuta kunobatanidza.
Mhando yerineni inonzi yakanakira machungesi inosanganisira poda synephrine powder. Synephrine powder yakabatana ne ephedrine, iyo yakashandiswa kuva chinhu chinozivikanwa chinowanikwa muhutano hwakasiyana-siyana hwekurasikirwa kwepill.
Synephrine powder inokurudzira zvakanyanya, uye zvichida inobatsira kushama muviri munguva pfupi. Zvisinei, migumisiro yechirwere inogona kuva yakakomba, saka izvi zvinofanira kungoshandiswa nekuchenjerera zvakanyanya.
3. Sibutramine upfu
Sibutramine powder inokanganisa makemikari ari muuropi ayo anokonzera kuisa muviri. Sibutramine powder inoshandiswa pamwe chete nekudya uye maitiro ekurapa kuneta kunogona kunge kwakabatana nechirwere cheshuga, high cholesterol, kana kuwedzerwa kweropa.
Sibutramine powder inogona kutorwa kana kuti isina kudya. Iwe unofanirwa kurasikirwa zvishoma ne4 pounds mumavhiki ekutanga e4 ekutora sibutramine powder uye kudya kudya kwekoriki yakaderera. Taurira chiremba wako kana iwe usingarasikirwi nekwenyama 4 mapaundi mushure mekutora mishonga yevhiki dze4.
Clenbutrol HCL powder ndeyekuwedzera iyo inoedza kuteedzera mafuta kupisa uye uremu chiito cheClenbuterol HCL powder. Clenbuterol's HCL upfu mhedzisiro inonakidza uye yakatsigirwa neboka revanozivikanwa uye vatambi, kusanganisira Jessica Hardy naVictoria Beckham. Inopisa mafuta ne “kuwedzera mwero apo mafuta emuviri anowedzeredzwa paunenge uchiwedzera mwero wemuviri wemagetsi” - nemamwe mazwi, ndiwo mushonga wakakwana wekudzora uremu.
Kutenga genius kuora kurasikirwa / kudya mishonga mishonga yakasvibirira inoda kuve yakangwarira zvikuru, kunyanya kuburikidza nekutengeserana kwenyika dzese. Iko kune mbiri mbiri dzinobva kune avo vanozviti vanopa zvinhu zvekunaka asi kuti vaongororwe sevanoshungurudza. AASraw inopa uye inopa chete zvinhu zvekugadzirisa.